Mayelana NATHI - Shanghai Yangli Furniture Material Co., Ltd.
Shanghai Yangli Ifenisha Izinto Co., Ltd.
Uzozwa ngokushesha insizakalo yethu yobungcweti neyokunaka.
Ukunamathela kwifilosofi yebhizinisi yobuqotho nokuphatha abantu ngokulingana, i-GERISS izibophezele ekunikezeni amakhasimende ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme.
Siyakwamukela ukuthi uvakashele inkampani yethu, ifektri kanye negumbi lethu lombukiso elibonisa imikhiqizo ehlukahlukene ezohlangabezana nokulindela kwakho.
Uma unesidingo sanoma imuphi umkhiqizo wethu, sicela uxhumane nathi manje. Silangazelele ukuzwa kuwe kungekudala.
Inkampani yethu SHANGHAI YANGLI FURNITURE MATERIAL CO., LTD esungulwe ngo-1999, igxile ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni ifenisha hardware. Njengamanje sisebenzisa izikhungo ezimbili ze-R & D kanye nesimo sezikhungo zokukhiqiza ubuciko eShanghai naseFoshan, esifundazweni saseGuangdong. Imikhiqizo yethu ithengiswa ngaphansi kwemikhiqizo emithathu ehlonishwa kakhulu:YANGLI, GERISS, HIFEEL. Ziyi-Drawer System, amaslayidi afihliwe, ama-slide aqukethe ibhola, ama-Slides wethebula, ihinji elifihliwe, izibambo, amahinji ehovini nezinye izesekeli zehadiwe zefenisha, ezisetshenziselwa ifenisha, amakhabethe, izinto ezisetshenziswa ekhaya neselula. Imikhiqizo yethu izuze idumela phakathi kwamazwe angaphezu kwangu-40 emhlabeni.
Ifilosofi yebhizinisi lethu isuselwa kumgomo othi "Round Sky kanye ne-Square Earth, Ukulwa Nokufunda", isisho sendabuko samaShayina. Abasebenzi bethu bazuze njengefa futhi baphila ngalo mgomo wokuthi akukho okungafezwa ngaphandle kwezinkambiso noma izindinganiso, futhi ibhizinisi lethu kufanele lihambisane nemithetho kanye nemithethonqubo ekusebenzeni kwethu kwansuku zonke. Sikhuthaza ngokuqinile ukuthuthuka okuqhubekayo nokuthuthuka kwemikhiqizo yethu nezinqubo ngokugcizelela kokuziphatha kwebhizinisi.
Ngemuva kwayo yonke imizamo yethu ku-hardware yefenisha, kufaka phakathi i-drawer slide, amakhabethe ihinji, i-hinge hinge, izibambo nezinye izinto zokufaka, sizuze idumela eliphakeme phakathi kwamakhabethe aseMelika, ifenisha eqinile, okokusebenza kwasekhaya neminye imikhakha.